विश्वमा सबैभन्दा लामो लिङ्ग भएका पुरुष हेर्नुहोस यस्ता छन् ! कत्रो छ त उनको लिङ्ग हेर्नुस... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
विश्वमा सबैभन्दा लामो लिङ्ग भएका पुरुष हेर्नुहोस यस्ता छन् ! कत्रो छ त उनको लिङ्ग हेर्नुस…
मेक्सिकोका ५४ वर्षीय रोबर्टो इस्क्वीभेल काब्रेराले जीवनमा कहिल्यै सेक्सको मज्जा लिन पाएका छैनन् । कारण, उनको लिंग यति लामो छ कि कसैले आँट्नै सक्दैन । घुँडासम्म आउने १८.९ इन्चको लिंग बोकेर बाँचिरहेका रोबर्टोलाई कुनै दुःखमनाउ भने छैन ।
शल्यक्रिया गरेर उनको लिंग घटाउन सकिन्छ भनेर डाक्टरहरुले भनिरहेका छन्, तर उनी चाहँदैनन् । खासमा उनलाई गर्व छ । सन् २००९ मा आफ्नो लिंगको आधिकारिकता पुष्टी गर्ने क्रममा लम्बाई नापिरहेको उनको भिडियो इन्टरनेटमा भाइरल भएको थियो ।
हैन यो प्रकृतिको सृजना पनि अपरम्पार छ । यदि साच्चिकै उनको यो लिङ्ग महिलाको यौनीमा छिर्न पाए के होला त महिलाको हालत ? – मोरंग अनलाइनबाट